Wararka - Sidee Loogu Xulaa Mashiinkaaga Saxaafadda Kuleylka?
Sidee loo Xulaa Mashiinkaaga Saxaafadda ee kuleylka?
Waa maxay mashiinka saxaafadda kuleylka?
Mashiinka saxaafadda kuleylka (ama "mashiinka wareejinta kuleylka") wuxuu qaabab ama naqshado ku wareejiyaa alaabada sida funaanadaha, suufka jiirka, calammada, boorsooyinka gacmaha, koobabka, koofiyadaha, iwm. Iyadoo loo adeegsanayo waqtiga, heerkulka, iyo cadaadiska. Mashiinka saxaafadda kuleylka ee aasaasiga ah waxaa lagu qalabeeyaa sanduuqa xakamaynta heerkulka fudud, halka mashiinka saxaafadda kuleylka ee ka sii awood badan uu leeyahay hawl xakameyn dijitaal ah oo keydin karta waqtiga, heerkulka iyo cadaadiska. Marka laga reebo xulashooyinka waxqabadka mashiinka kuleylka ee aasaasiga ah, qaar ka mid ah mashiinnada saxaafadda kuleylka ayaa sidoo kale bixiya shaqooyin kale sida pop-up otomaatig ah, riix si otomaatig ah, iwm, oo si wanaagsan ula kulmi kara dalabkaaga gaarka ah. Cunsurka kale ee laga fiirsanayo ayaa ah in la isticmaalo mishiinka kuleylka ee kuleylka ee pneumatic ama mashiinka kuleylka kuleylka ee birlabta magnetic si loo ilaaliyo waqtiga iyo shaqaalaha. Sidaad ogtahay, waxaa jira go'aanno badan oo la gaarayo marka la dooranayo mashiinka saxaafadda kuleylka, ujeedkeenuna waa inaan ka jawaabno dhammaan su'aalahan ku jira tusahan iibsadaha oo faahfaahsan!
Mashiinka wareejinta kuleylka noocee ah ayaa dabooli kara baahideyda?
Tooska ah mashiinka saxaafadda kuleylka
Waxa ugu caansan suuqa waa mashiinka wareejinta kuleylka cadaadiska tooska ah, oo sidoo kale ah kan ugu fudud ee loogu shaqeeyo novices.
Mashiinka wareejinta kuleylka ee lulid, waxaad ku daabacan kartaa waxyaabo ka sii dhumuc weyn, qaybta korena way lulaysaa si looga hortago gubashada inta lagu jiro meelaynta alaabada, si aad u dedejiso wax soo saarka, qashinka u yaraato, oo aad u dheereyso, aamin u noqoto oo aad u saxsanaato.
Maxaa loo doortaa sheeko?
Yiwu Tale Mashiinnada & Qaybaha Dayactirka Facoy waa soo saare ka mid ah mashiinnada sublimation iyo qeybaha dayactirka oo leh tas-hiilaad tijaabo oo si fiican u qalabeysan iyo xoog farsamo oo xoog leh. Iyada oo leh noocyo kala duwan, tayo wanaagsan, qiimo macquul ah iyo naqshado casri ah, alaabooyinkeena ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshado badan. Alaabtayada ugu muhiimsan waxay ka kooban yihiin Mashiinka gudbinta kuleylka ee funaanada, 4-1 mashiinka daabacaadda mugga dijitaalka ah, 6-1 mashiinka kala iibsiga kuleylka dijitaalka ah, 8-1 mashiinka kala iibsiga kuleylka dijitaalka ah, mashiinka daabacaadda mugga, iyo muraayadaha la duubay ee la xiriira, muraayadaha sublimation, midabka beddelashada mug, muusig muusig ah, koob mug leh iyo warqad khad ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa si ballaaran loo aqoonsan yahay oo ay ku kalsoon yihiin dadka isticmaala waxayna la kulmi karaan si joogto ah isbeddelada baahiyaha dhaqaale iyo bulsho. Ku soo dhawow OEM, waxaan ku faraxsanahay inaan bixinno mashiin muunad ah iyo amar yar oo la aqbali karo sidoo kale.Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiil cusub iyo kuwa duug ah oo ka kala socda qeybaha kala duwan ee bulshada si ay noola soo xiriiraan xiriir ganacsi mustaqbalka iyo guul wadaaga!